Vejer de la Frontera, taundi jena rakachena mudunhu reCádiz | Kufamba Nhau
Luis Martinez | | Spain maguta
Vejer de la Frontera iguta rakanaka mupurovhinzi ye Cádiz. Zvizhinji zvacho zviri pachikomo chakatemwa ne Rwizi rweBarbate, iyo inokupa iwe unoshamisa maonero eese ari mairi nharaunda yeLa Janda pamwe nemabhichi ari padyo emahombekombe eCadiz.
Kana iwe ukafunga kushanyira Vejer de la Frontera iwe unowana imwe yeakanyanya kunaka machena maguta munharaunda yako. Asi zvakare yakanaka inoshamisa nhaka, yakasarudzika gastronomy uye inonakidza mabhati mune Atlantic Ocean pamhenderekedzo yegungwa iri pedyo ye El Palmar. Kana iwe uchida kuziva Vejer de la Frontera zvirinani, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Chii chaungaona muVejer de la Frontera
1.2 Nhare yeVejer de la Frontera
1.3 Chechi yeMuponesi Mutsvene
1.4 Iyo mhedzisiro yaMai vedu vaOliva
1.5 Dare remusangano weVakadzi veConceptionist
1.6 Imba yaMayorazgo
1.7 Muzinda weMarquis weTamarón
1.8 Plaza de España, iyo nzvimbo yetsinga yeVejer de la Frontera
1.9 Mhepo inogaya
1.10 Mugero weSanta Lucia
1.11 Kukomberedza kweVejer de la Frontera
2 Ndeipi zvirinani kuenda kuVejer de la Frontera
3 Ungasvika sei kuVejer de la Frontera
Chii chaungaona muVejer de la Frontera
Guta reCadiz rakaziviswa Yenhoroondo Artistic Complex uye iri chikamu che network ye Iwo Akanaka Kwazvo Misha muSpain, zvese izvo zvichakupa pfungwa yezviyeuchidzo zvaunogona kuwana muVejer. Ngativaratidzei kwavari.
Guta reCadiz rinochengetedza chikamu chakanaka cherusvingo rwekare, chakavakwa muzana ramakore regumi neshanu. Inotambanuka ingangoita mamaira maviri uye inovhara nzvimbo yehekita ina. Kana iwe ukafamba mairi, iwe uchaonawo madhoo aishanda sekuwana Vejer. Pakati peizvi, iyo maberere eVilla, Sancho IV, Puerta Cerrada uye de la Segur.
Kunyangwe uchibvumirana muzita, iyo bastion yeSegur Izvo hazvina chekuita nemusuwo wekupedzisira uyu, asi neiyo yeVilla, yaive yekutanga. Neichi chikonzero, iyi dziviriro inodzivirira yakavakwa nechinangwa chekudzora musuwo weVejer.
Saizvozvo, madziro anochengetedza shongwe mbiri. Iyo waMayorazgo o del Homenaje inochengetedza belfry yeiyo yanyangarika imba yekunamatira uye inokupa iwe inoshamisa maonero emuromo we rwizi Barbate. Kune chikamu chayo, Corredera shongwe yakashanda kuongorora uye zvakare kutaurirana nayo Medina Sidonia kuburikidza nezviratidzo.
Nhare yeVejer de la Frontera
Ndicho chimwe chiratidzo chikuru cheguta reCadiz. Kuvakwa kwaro kwakatangira kubva muzana ramakore regumi nerimwe uye rinotonga guta kubva kunzvimbo yaro yepamusoro. Inosanganisira maviri patios, chikuru nemaoko, pamwe nemadziro akakoromorwa uye musuwo webhiza rakagadzirirwa nealfiz. Muzana ramakore rechiXNUMX yakashanda senzvimbo yekugara yeiyo Mutongi weMedina Sidonia, ishe weVejer.
Chechi yeMuponesi Mutsvene
Iyo tembere ine chirongwa chechechi, pamwe chakavakirwa pane zvakasara zvemusikiti wekare. Yakavakwa pakati pegumi nemana negumi nematanhatu emakore saka ine chikamu che Gothic Mudejar maitiro uye mumwe kunonoka-gothic. Mumativi ayo maveve iwe unogona kuona matatu machira. Asi mune zvemukati iyo aritari yakakwirira, basa remuvezi Francisco Villegas chinobata mufananidzo uye yakaitwa muzana regumi nemanomwe century.
Iyo mhedzisiro yaMai vedu vaOliva
Yakavakwa zvakare pamasara eimwe tembere, mune ino kesi yeVisigothic hermitage. Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX uye inomira pamberi payo yakacheneswa façade, chinoitika chinowanzoitika kudhorobha rese. Seizvo zita rayo rinoratidzira, inogara a kuvezwa kweMhandara yeMiorivhi, musande weVéjer.
Dare remusangano weVakadzi veConceptionist
Yakavambwa muzana ramakore regumi nematanhatu naDon Juan de Amaya senzvimbo yekuviga iye nemukadzi wake, inomira kunze kweiyo Renaissance façade, iyo dome iyo inopfekedza korona yeatari yayo huru uye makona akachekawa ayo vanozorora. Parizvino, ndiyo dzimbahwe re Vejer Tsika uye Tsika Museum.
Hermitage yeMukadzi wedu waOliva
Yakanamatira kushongwe yezita rimwe chete ratakakuudza nezvayo, imba yemanheru yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX. Unogona kushanyira ruvanze rwayo rwemukati, asi ziva kuti inogarwa saka zviri nani kuti ukumbire mvumo yekuidaro.
Muzinda weMarquis weTamarón
Iyo zvakare iri XNUMXth century manor imba, asi mune yayo iri padyo neSegur arch. Nekudaro, iyo inokupa iwe chimwe chinokwezva: inogara iyo Vejer Nhoroondo uye Archaeology Museum. Inoumbwa nemakamuri gumi nematatu, masere acho ari ezvinhu zvekuchera matongo zvinowanikwa munharaunda yeguta, nepo matatu ari ehunyanzvi.
Plaza de España, iyo nzvimbo yetsinga yeVejer de la Frontera
Kuvapo kwaro kwakadzokera muzana ramakore rechiXNUMX, apo guta rakasiya nzvimbo yaro yakakomberedzwa. Nechekare muzana ramakore rechimakumi maviri rakanaka Sevillian mataira tsime. Iyo inozivikanwa zvakare se "Plaza de los Pescaitos".
Ichakwezva kutarisa kwako kuti uwane mahwindimiri akati wandei mukati meguta reVejer. Nekuda kwesimba rainaro munzvimbo, ndezve Maitiro eCarthaginian, yakasimba kupfuura izvo zvakajairika zveLa Mancha.
Mugero weSanta Lucia
Yakavakwa muzana ramakore rechiXNUMX, iri mu Rural nucleus yeSanta Lucía, yakazivisa Natural Monument yehuswa hwayo hwakakora, mhedzisiro yekuwanda kwemvura munzvimbo iyoyo.
Kukomberedza kweVejer de la Frontera
Guta reCadiz zvakare rinokupa iwe nharaunda yakanaka. Yakagadzirwa neiyo La Breña neMarismas del Barbate Natural Park, ine nzvimbo dzakadai seGomo reQuebradas kana Peña Cortada, zvambotaurwa Rural nucleus yeSanta Lucía and the La Muela chitubu.
Asi, kana iwe uchida gungwa, Vejer inoipawo. Kunyanya maviri, iya yeMangueta, yakazivisa nzvimbo yakachengetedzwa, uye iya yaEl Palmar, kwaunogona zvakare kuona yekare yegungwa nharirire.
Ndeipi zvirinani kuenda kuVejer de la Frontera
Guta reCadiz rinowanikwa anenge mazana maviri emamita pamusoro pegungwa. Inopa a mamiriro ekunze akapfava, nechando chinofadza kunyange hazvo kuchinaya kupfuura zhizha. Kune avo chikamu, chekupedzisira chinopisa asi chisiri kudzipwa.
Kazhinji, inzvimbo inonakidza kwazvo. Iko kutsamwa chete iwe kwaunogona kuwana ndeye Levante mhepo, iyo dzimwe nguva inoridza kwemazuva akati wandei. Chero zvazvingaitika, nguva dzakanakisa dzekuti iwe ushanyire guta iri chirimo nezhizha. Uye zvakare, mhemberero huru dzeVejer dzinoitika munguva idzodzo: iyo Chitubu Chakanaka and the Manheru eMukadzi wedu weMiorivhi.
Ungasvika sei kuVejer de la Frontera
Musha uyu uri makiromita angangoita makumi mashanu neshanu kubva Cádiz yatove anenge zana nemakumi matanhatu e Sevilla. Kubva kumaguta maviri aunayo mabhazi izvo zvinomira muVejer. Asi, kana iwe uchida kufamba mumota yako wega, mugwagwa iwe waunofanira kutora ndiyo A-48 uye tora iyo kubuda 36.
El Palmar Gungwa
Kana iwe ukafamba uchibva kune imwe nzvimbo kure, iwe une nhandare yendege en Jerez de la Frontera nendege dzinowanzoenda kuMadrid neBarcelona. Saizvozvo, njanji dzine zviteshi mu Cádiz uye zvake Sherry.
Mukupedzisa, Vejer de la Frontera Iri iguta rakachena chena mudunhu reCádiz. Iyo inokupa iwe inoshamisa nharaunda nharaunda uye akawanda mamaki. Kana kune izvi zvese ukawedzera hunhu uye hushamwari hunhu hwevanhu vayo, une zvikonzero zvekushanyira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Spain maguta » Vejer de la Frontera
Maguta ane vanhu vakawanda munyika